LIFESTYLE - Mckzone Daily
အသီးအနှံတွေက ထူးထူးဆန်းဆန်း သက်ရှိသတ္တဝါတွေလို ရုပ်ပုံမျိုး ပေါ်ထွက်နေခဲ့တဲ့အဖြစ်
တစ်ခါတစ်လေ သစ်သီးဝလံတွေဟာလည်း သက်ရှိသတ္တဝါတွေရဲ့ ရုပ်ဆင်းအင်္ဂါလို ထူးထူးဆန်းဆန်းပုံစံမျိုးတွေ ပေါ်ထွက်လာတတ်ပါတယ် ။ တစ်ခါတစ်လေ ခြေချောင်းလက်ချောင်းတွေ ပုံစံ ရှိပြီး တစ်ခါတစ်လေ ရုပ်မျက်နှာပုံစံတွေလည်း ဖြစ်နေတတ်ကြပါတယ် ။ သို့ပေမဲ့လည်း အဆိုပါအခိုက်အတန့်မျိုး ကြုံတွေ့ရခဲပါတယ် ။ ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ အထူးဆန်းဆုံး သတ္တဝါတွေရဲ့ပုံဏ္ဍာန်နဲ့ဆင်တူတဲ့ သစ်သီဝလံတွေရဲ့ ရုပ်ပုံတွေကို စာဖတ်သူတို့အတွက် ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ် ။ . . . . . . . ….
ကလေးတွေ တစ်သက်မမေ့နိုင်မဲ့ အလန်းစားဓာတ်ပုံတွေကို ရိုက်ကူးပုံဖော်ပေးခဲ့တဲ့ ဖခင်
John Wilhelm အမည်ရှိတဲ့ အမျိုးသားဟာ ဓာတ်ပုံနည်းပညာတွေနဲ့ ပက်သက်ရင်အတော်လေးကို ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်လွန်းလှသူပါ ။ သူ့ရဲ့ ဇနီး နဲ့ ကလေးငယ်တွေအတွက် ရယ်စရာကောင်းပြီး ဆွဲဆောင်မှုရှိလွန်းလှတဲ့ ဓာတ်ပုံတွေကို ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးပုံဖော်ပြသူပါ ။ ဒါကြောင့် သူ့ရဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုကြည့်လိုက်ရုံနဲ့ သူ့ရဲ့ဆရာတင်လောက်တဲ့စွမ်းရည်တွေ ဘယ်လောက်မြင့်မားလွန်းလဲဆိုတာကို ခန့်မှန်းသိနိုင်ပါတယ် ။ ဒါကြောင့် အဆိုပါဓာတ်ပုံလေးတွေကို စာဖတ်သူတို့အတွက် ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်နော် ။ . . . . . . ….
Las Vegas မှာရှိတဲ့ နာမည်ကြီး ရေတူးမြောင်းလိုဏ်ခေါင်းတစ်ခုဟာ အရှည် 200 မိုင်ခန့်ရှိပြီး အဆိုပါလိုဏ်ခေါင်းမှာ မှီခိုပြီး အားကိုးနေထိုင်သူ အိမ်ခြေမဲ့လူပေါင်း 1000 ကျော်ခန့်ရှိကြောင်း သိရပါတယ် ။အချို့လူတွေဟာဆိုရင် တစ်ကယ့်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်လို အိမ်အသုံးအဆောင်ပရိဘောဂတွေ ၊ ကုတင်တွေ ၊ စာအုပ်စင်တွေနဲ့ ထားရှိပြီး နေထိုင်လေ့ရှိကြပါတယ် ။ တစ်ခါတစ်လေ ရေကြီးရေလျှံတဲ့အချိန်မျိုးမှာဆိုရင် အချင်းချင်းကူညီဖေးမပြီးနေထိုင်ကြကာ ၊ အချင်းချင်း ထိခိုက်ပြသာနာရှာခြင်းမျိုး လုံးဝမရှိကြောင်းလည်း သိရပါတယ် ။အဆိုပါ လိုဏ်ခေါင်းထဲမှာ…
လူတွေမလိုအပ်တော့လို့ စွန့်ခွာထားရစ်ခဲ့ကြတဲ့ ကြောက်မက်ဖွယ်နေရာများ
လူတွေ မလိုအပ်တော့လို့ ဂရုမစိုက်တော့ဘဲ စွန့်ခွာထားရစ်ခဲ့ကြတဲ့ နေရာမျိုးကို ရောက်ဖူး ၊ တွေ့ဖူးကြမှာပါ ။ အချို့သောနေရာတွေက ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းပြီး ၊ ကြေကွဲဝမ်းနည်းချင်စရာလည်း ဖြစ်နေပါတယ် ။ ဒါပေမဲ့လည်း နေရာတိုင်းကတော့ ကြည့်လိုက်ရုံနဲ့ ကြက်သီးထမိတာအမှန်ပါပဲလေ ။ ဘာအကြောင်းကြောင့် လူတွေ စွန့်ခွာသွားခဲ့ကြတာလဲဆိုပြီး တွေးထင်မိကြမှာပါပဲ ။ ဒီဓာတ်ပုံလေးတွေရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ ကြေကွဲဝမ်းနည်းချင်စရာ အကြောင်းအရာတွေ နဲ့ လှပလွန်းတဲ့အရာတွေကို တစ်ကြိမ်တည်းခံစားမိကြမှာပါ ။ အဆိုပါနေရာတွေရဲ့ ဓာတ်ပုံတွေကို…
အန္တရာယ်အများဆုံး Selfies ဓာတ်ပုံတွေအဖြစ် သတ်မှတ်ခံထားရတဲ့ ရုပ်ပုံများ
အချို့သောလူတွေကတော့ အသက်ဘေးအန္တရာယ်ရောက်နေတဲ့အချိန်မှာတောင် အမှတ်တရအနေနဲ့ selfies ဓာတ်ပုံတွေကို ရိုက်ကူးတတ်လေ့ရှိပါတယ် ။ အချို့ကျတော့လည်း တကယ့်ကိုအန္တရာယ်များတဲ့နေရာသို့ သွားရောက်ပြီး selfies ဓညတ်ပုံတွေ ရိုက်ကူးတတ်ကြပါတယ် ။ အဆိုပါဓာတ်ပုံတွေကို social media ပေါ်မှာ ပြန်လည်ဝေမျှပြီး နာမည်ကျော်ကြားချင်ကြတာပါ ။ အဆိုပါ selfies ဓာတ်ပုံတွေကြောင့် အသက်သေဆုံးကြရတဲ့ လူတွေလည်း အများအပြားရှိကြမယ်ဆိုတာ စာဖတ်သူတို့ သိရှိပြီးသားဖြစ်မှာပါ ။ ဒါကြောင့် ထိတ်လန့်ဖွယ်ယေအကောင်းဆုံး selfies ဓာတ်ပုံတွေကို စာဖတ်သူတို့အတွက်…
A4 စာရွက်ထက် သေးငယ်တဲ့ ခါးသွယ်သွယ်လေး ပိုင်ဆိုင်ထားကြောင်း ကြွားလုံးထုတ်ခဲ့ကြတဲ့ မိန်းကလေးများ
‘A4 Waist Challenge’ ဟာ အာရှမိန်းကလေးတွေ အကြားအတော်လေးကိုရေပန်းစားခဲ့ပါတယ် ။ အကြောင်းကတော့ ကိုယ့်ရဲ့ခါးဟာ သေးသွယ်လွန်းလို့ A4စာရွက် ထက်သေးငယ်ကြောင်းကို ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီး သက်သေပြကြလို့ပါပဲ ။ အစပိုင်းမှာတော့ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ Weibo မှာသာ ရေပန်းစားခဲ့ပေမဲ့ နောက်ပိုင်း Instagram နဲ့ Twitter တွေပေါ်မှာပါ အတော်လေးကို ရေပန်းစားခဲ့ပါတယ် ။ ပိန်းသွယ်သွယ်မိန်းကလေးတွေအတွက်ကတော့ ကြွားလုံးထုတ်စရာဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ အချို့သော ခန္ဓာကိုယ်ပြည့်တဲ့မိန်းကလေးတွေကတော့ နှိုင်းယှဉ်မှု တစ်ခုသာဖြစ်ကြောင်း ဝေဖန်ပြစ်တင်ခဲ့ကြပါတယ်…
လူတွေရဲ့ရင်တွေကိုလှုပ်ခတ်သွားစေမဲ့ ကလေးငယ်တွေနဲ့ စာနာ​ထောက်ထားမှုရှိလွန်းတဲ့ လုပ်ရပ်များ
အခုလက်ရှိကမ္ဘာမြေကြီးမှာ စစ်ရေး ၊ နိုင်ငံရေး ၊ စီးပွားရေး နဲ့ ကျန်းမာရေး ခက်ခဲအကျပ်တည်းနေကြတာ နေရာတိုင်းလိုလိုပါပဲ ။ ဒါကြောင့် ကောင်းမွန်တဲ့သဘာဝတရားတွေက လူအတော်များများရဲ့ရင်မှာ မရှိတော့ဘဲ ၊ အမုန်းတရာ ၊ အနိုင်ယူမှု ၊ အမြတ်ယူမှု ၊ လောဘတရားတွေနဲ့သာ ပြည့်နှက်နေကြပါတော့တယ် ။ သို့ပေမဲ့လည်း ဖြူစင်လွန်းလှတဲ့ ကလေးငယ်တွေအနေနဲ့တော့ လူသားချင်းစာနာသိတတ်နားလည်စိတ်တွေ ၊ ဖေးမကူညီချင်စိတ်တွေ ရှိနေကြဆဲဆိုတာကို ယခုဖော်ပြနေတဲ့ ဓာတ်ပုံ တွေက…
အန္တရာယ်တွေကြားထဲ မိုက်ရူးရဲဆန်စွာ တိုးဝင်လေ့ရှိကြတဲ့ တိရစ္ဆာန်များ
အချို့သောသူတွေဟာ မိုက်ရူးရဲဆန်တဲ့အလုပ်တွေကို အန္တရာယ်ရှိမှန်းသိသိရက်နဲ့ ပြုလုပ်တတ်ကြပါတယ် ။ လူတွေမှမဟုတ်ပါဘူး.. ခေါင်းမာပြီး မိုက်ရူးရဲဆန်တဲ့အလုပ်တွေကို တိရစ္ဆာန်တွေလည်းပြုလုပ်တတ်ကြပါတယ် ။ တစ်ခါတစ်လေ ကိုယ်မရှိသင့် ၊ မနေသင့်တဲ့နေရာမှာ သွားရောက်နေထိုင်ကြတဲ့ တိရစ္ဆာန်တွေရဲ့ဓာတ်ပုံတွေကို စာဖတ်သူတို့အတွက် ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်နော် ။ . . . . . . . . . . . Jasmine (Mckzone Daily) Source :…
အန္တရာယ်ကင်းပြီးခိုင်ခံ့ဖို့မစဉ်းစားဘဲ အဆင်ပြေသလိုသာ တည်ဆောက်ထားကြတဲ့ အဆောက်အအုံများ
အချို့သောသူတွေက အိမ်တွေဆောက်လုပ်ရင် ကိုယ်လိုချင်တဲ့ပုံစံကို ကိုယ်တိုင်တည်ဆောက်ချင်တတ်ကြပါတယ် ။ ဆောက်လုပ်ရေးပညာရှင်တွေကိုငှါးရမ်းခြင်းမျိုးမပြုလုပ်ဘဲ တည်ဆောက်ထားကြပြီး ၊ အန္တရာယ်ကင်းပြီး ခိုင်ခံ့ဖို့အတွက်လည်း စဉ်းစားဆင်ခြင်ခဲ့ပုံမရမှန်း ဓာတ်ပုံတွေကိုကြည့်ရုံနဲ့ သိနိုင်ပါတယ်လေ ။ အချို့ပုံတွေမှာဆိုရင် လုံးဝစဉ်းစာချင့်ချိန်နိုင်စွမ်းမရှိဘဲ အဆောက်အအုံတွေကို ပြုလုပ်ဖန်တီးထားတာမျိုးကိုပါ မြင်ရမှာပါ ။ . . . . . . . . . . . . . . Jasmine…
ချစ်သူရှိကြောင်း ကြွားလုံးထုတ်ချင်ကြသူတွေအတွက် Romantic ဆန်တဲ့ဓာတ်ပုံတွေကို ရိုက်ကူးပုံဖော်ပြခဲ့သူ
Rain Cavalry Yokohama အမည်ရှိတဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံမှာနေထိုင်တဲ့ အမျိုးသားတစ်ဦးဟာ သူ့ရဲ့ဟန်ဆောင်ချစ်သူအတုနဲ့ ရိုက်ကူးထားတဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေကြောင့် Facebook မှာ followers အတော်များများရရှိထားသူတစ်ဦဖြစ်ပါတယ် ။ Social media ပေါ်မှာ ဝေမျှထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေမှာဆိုရင် တစ်ယောက်တည်းဆိုပေမဲ့လည်း အများအမြင်မှာတော့ ချစ်သူကောင်မလေးနဲ့ ပျော်ရွှင်နေတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပါ ။ သူ့ရဲ့စိတ်ကူးဥာဏ်ကောင်းလွန်းပြီး ပညာသားပါပါ ရိုက်ကူးထားတဲ့ Romantic ဆန်တဲ့ ဓာတ်ပုံလေးတွေဟာ လူငယ်တွေအကြားမှာ အတော်လေးကိုရေပန်းစားနေလျက်ရှိပါတယ် ။ . . . ….